PHA iyo GIZ oo maanta daboolka ka qaaday Sanduuqa tartanka dhismaha wadada Garowe iyo Gaalkacyo – VILLA PUNTLAND
PHA iyo GIZ oo maanta daboolka ka qaaday Sanduuqa tartanka dhismaha wadada Garowe iyo Gaalkacyo
By Author D on Sep 23, 2016 No Comment
Hay’adda wadooyinka Puntland ee PHA ayaa maanta si rasmi ah u furtay Sanduuqa Shirkaduhu kusoo direen codsiga qandaraaska dhismaha wadada dheer ee Garowe iyo Gaalkacyo, kadib markii dhawaan la baahiyay tartanka qandaraaskan oo ay maal-galinayso Hay,adda GIZ oo laga leeyahay dalka Germany.
Gudoomiyaha Hay,adda PHA Eng Maxamuud Cabdinuur Aadan ayaa sheegey inay si rasmiya maanta daboolka uga qaadeen sanduuqa ay kusoo rideen codsiyadooda shirkadaha u tartamaya dhismaha wajiga 1aad ee wadada oo 81 KM lagu dhisayo .
Masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Puntland Shire Xaaji Faarax, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka, Ilaalinta Duurjoogta iyo Dalxiiska Puntland Cali Cabdulaahi Warsame, Sarkaal sare oo ka socda Hay,adda PHA ayaa ka qeyb galay munaasabada maanta daboolka looga qaaday sanduuqa lagu soo riday codsiyada dhismaha laamiga dheer ee isku xiraya Garowe iyo Gaalkacyo.
Eng Maxamuud Cabdinuur ayaa sheegey inay si wada jir ah u fulinayaan mashruucan Dowlada Puntland oo ay wakiil uga tahay Hay,adda Wadooyinka PHA iyo Midowga Reer Yurub oo ay wakiil ka tahay Hay,adda GIZ.
Waxa uu sheegey Eng Maxamuud Cabdinuur inay si wada jir u maamulayeen sanduuqa lagu soo ridayay codsiga shirkadaha ku tartamaya qandaraaska dhismaha wadada guddi ka kala tirsan Hay,adda Wadooyinka Puntland iyo Hay,adda GIZ , Islamarkaana uu leeyahay sanduuqu afar quful oo muujinaya inuu si cadaalad ah ku dhacayo u tartamida wadadan.
Dhismaha wadada Garowe iyo Gaalkacyo ayaa shacabka reer Puntland si aad ah u sugayaan maadaama ay wadadu u baahan tahay dib u dhis xoogan lagu sameeyo si ay hoos ugu dhacaan shilalka gadiidka ee khatarta badani ka dhalato.
PHA iyo GIZ oo maanta daboolka ka qaaday Sanduuqa tartanka dhismaha wadada Garowe iyo Gaalkacyo added by Author D on Sep 23, 2016